China Customized Merry Christmas Creative 4.3 Inch LCD Display Digital brochure video Salaanta boostada Kaarka Waxsoosaarka iyo Warshadda | Buug-gacmeedka
Gaarka ah Merry Christmas Creative 4.3 Inch LCD Display Digital brochure video Salaanta boostada
KA HADAL JACAYLKAAGA: weli qorista kaararka dhalashada kuwa aad jeceshahay? Isku day inaad ka hadasho, badeecadeenu waxay leedahay kaarka xusuusta ee 1Gb iyo shaashadda LCD ee 4.3-7 ”si ay kuu oggolaato inaad soo bandhigto fiidiyowyo aad ugu hambalyeynayso saaxiibkaa
WAA LAGU SAMEEYSAN KARAA: daboolka maran iyo bogga gudaha ayaa ka tagaya meelo badan oo lagu qoro ereyada ugu hooseeya; waxaan sidoo kale u diyaarinay istiikarada mowduucyo kaladuwan ka sameysan sidii aad kaarkaan uga dhigi lahayd hadiyad gaar ah
SHIRKAD KU AH QOFKA AAD JECESHAHAY: si ka duwan kaararka waraaqaha ee salaanta hal-mar ah, kaarkayaga fiidyowga fiidiyowga ayaa si fiican loo soo saaray oo u adkeysanaya deegaanka; Kaadhka ka qaado wakhti go'an oo waxay noqon doontaa shirkad muddo dheer soconaysa
SAHAL IN LA ISTICMAALO: kaarkani MA QORI KARA fiidiyaha kaligiis; si fudud u isticmaal sida flash disk, ku keydi fiidiyowga kaarka xusuusta oo samee; kaarkayaga hambalyada fiidiyowga wuxuu taageeraa qaabab muuqaal oo kala duwan sida: MKV, AVI, MOV / MP4, TS, ASF, FLV, PMP, RMVB, MPG / VOB
ISTICMAALKA UNIVERSAL: kaarkayaga salaanta fiidiyowgu wuxuu ku habboon yahay dhalashada, ciidaha sida Sannadka Cusub, Maalinta Aabbaha, Maalinta Hooyada, Hadiyadda Arooska; xitaa ku habboon kaydinta fiidiyowga super baaquli ee saaxiibbadaada
Video Card / Video Salaanta Kaarka waa xirmo daabacan oo leh shaashad yar oo LCD ah, looxyada PCB, kuwa ku hadla iyo baytariyada lithium ee dib loo soo celin karo oo ay la socdaan USB
isku xirnaanta u oggolaaneysa beddelka fiidiyowga iyo Dib-u-buuxinta unugga. Fiidiyowyadan fiidiyowyadu waxay leeyihiin adeegsiyo badan: waxaa loo isticmaali karaa xayeysiinta suuqgeynta tooska ah iyo dhiirrigelinta.
Waxay u oggolaanayaan Ciyaaraha fiidiyowga ee nooc kasta oo qaabab ah. Si aad fikrad fiican u noqotid, waan ku sugeynaa!
1. Fur kaarka: daaran oo si toos ah ayuu u ciyaari doonaa fiidiyowga. Kaarka wuu xiray, korontada ka dem. Ama riix badhanka ciyaarta ee buug yaraha si aad uguhesho fiidiyowga.
2. Wareeg u ciyaar fiidiyowyo dhowr ah ama samee fiidiyo 4 qaybood ah oo leh 4 badhan oo kala duwan oo muujinaya mawduuc kala duwan.
3. Waad ku shubi kartaa fiidiyowga aad ugu jeceshahay kaarka adoo adeegsanaya USB uploading.
4. Qaabka, naqshadeynta, cabirka waa la habeeyay.
5. Iyada oo loo marayo fiilada USB-ga ee loogu talagalay gudbinta xogta iyo soo-celinta, waxay sidoo kale taageertaa fiidiyoowga fiidiyowga markii la dalbanayo.
- Qaababka sawirka: JPG, BMP. Qaab muuqaal ah: AVI, MP4, iwm
- Qalabka: Kaarka salaanta + shaashadda TFT + dekedda USB
- Awoodda xusuusta: 128 MB-8 GB
- Hal xakameyn badhan ama badhan kasta ayaa xakameynaya fiidiyow kasta
- Barnaamij iyo hawlo kala duwan
- Batariga dib loo soo celin karo ee Lithium
- Awood koronto: batroolka lithium-ka ee 3.7V dib-u-buuxin kara ama USB 5V-ga ah
- Isdhexgalka: dekedda mini-USB
- Nidaamka hawlgalka: XP / Vista / Windows 7 iyo wixii la mid ah
Kartoonno adag oo loogu talagalay maraakiibta nabdoon: Waxaan u adeegsannaa kartoonnada adag oo alaabooyinka si ammaan ah ugu ilaalin doona markay rartaan. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira dhogor luul qaro weyn oo u dhexeeya kaararka iyo alaabada si loo ilaaliyo alaabta.
Hore: Airbiotics A5 hardcover Digital Book / Buug yaraha Lcd / Catalog Video leh 7 inch Inch
Xiga: IDW daabacaadda maqaarka la qaadan karo ee lcd shaashadda buuga yar ee xayeysiinta
Generation Wireless Earphone air pro 3 oo leh BT ...